Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Falastiin oo u Yeedhay Danjirahoodii Maraykanka.
Maamulka Falastiin oo u Yeedhay Danjirahoodii Maraykanka.
Maamulka Falastiin ayaa shaaciyay in ay u yeedheen safiirkoodii u fadhiyay dalka Mareykanka si ay wadatashi ula yeeshaan, isbuucyo uun ka dib markii madaxweyne Donald Trump uu Qudus u aqoonsaday in ay tahay caasimada Israa’iil.
Madaxweynaha Falastiiniyiinta, Maxamuud Cabbaas, ayaa sheegay in uusan aqbali doonin qorshe nabadeed oo hadda ka dib ka yimaada dhinaca Maraykanka. Wasiirka Arimaha Dibada ee Falastiiniyiinta Riyad al-Maliki ayaa sheegay in uu u yeedhay ergeyga Ururka Xoreynta Falastiiniyiinta ee PLO ee u fadhiyay Washington DC Husam Zomlot.
Rabshado ayaa ka dhacay marinka Qaza ka dib markii uu Trump ku dhawaaqay go’aankaasi. 13 falastiiniyiin ah ayaa ku dhimatay rabshadahaasi oo inta badan u dhexeeyay dibadbaxayaasha iyo ciidammada Israa’iil.
Maraykanka ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee Qudus u aqoonsado in ay tahay caasimada Israa’iil, waxay noqoneysaa dalkii ugu horeeyay ee tallabadaasi qaatay tan iyo markii la alkumay xukumadda Israa’iil, Israa’iil ayaa haysatay bariga Qudus tan iyo markii uu dhacay dagaalkii Bariga Dhexe sannadkii 1967, waxayna goosatay 1980kii.
Yuhuuda ayaa u aragta in ay iyadu leedahay, laakiin shuruucda caalamiga ah waxay dhigayaan in ay tahay dhul la haysto. Israa’iil-na waxay Qudus u aragtaa in ay waligeed ahaan doonto caasimaddooda aanan la kala qaybin karin. Laakiin Falastiiniyiintu waxay u arkaan Bariga Qudus in ay tahay caasimada dalka ay Mustaqbalka yagleeli doonaan.